Kaadị ụkpụrụ mara ọkwa na Thailand
The Thai Securities na Exchange Commission ekwuputala na nkọwa nke mba cryptocurrency ụkpụrụ. The jikoro na-nwapụtara na regulator nke June 7th nzukọ, na-atụ anya na-aga n'ime mmetụta mgbe e mesịrị na a ọnwa.
Dị ka sec osote onye odeakwụkwọ-general Tipsuda Thavaramara, sec ga-ekwe ka Bitcoin na Litecoin ka ahịa dị ka a trading ụzọ, n'etiti ndị ọzọ.
"Ụfọdụ n'ime ndị isi ibiere ji site sec amata cryptocurrency trading ụzọ abụọ" ahụ bụ "otutu mmadu kwenyere ịtụkwasị obi na cryptocurrency liquidity."
Silicon Valley si Top Dental Practice Amalite Ọzịza Dentacoin, na Dental Cryptocurrency
Enwu Dental - Silicon Valley si n'elu eze omume, dabere na Fremont, California - malitere mmejuputa Dentacoin, dijitalụ mkpụrụ ego nke dentistry, dị ka a n'aka ugwo.
Enwu Dental Shamia Dr. Swapna Raveendranath e dị iche na a na-adịbeghị anya award maka Best Dọkịta ezé na mpaghara, na-eso "Best of Fremont Reader si Choice" mpi na 2016. Na ya ọhụrụ ụzọ mejuputa cryptocurrencies na ya omume, Dr. Raveendranath Aims ịnọgide njem ya na "na-elekọta bụla ndidi na obodo" na-enye ha na n'elu mma, ọnụ na inweta eze na-elekọta. The ọgwụ na-atụ anya na ịgbasa ya mmekorita ya na Dentacoin na ahu nagide ya zuru nwere.
Dr. Swapna anaghị akwụsị e doo, dị ka ọ na-etinye aka Philanthropy, na Ọkà mmụta Award Program, ịbụ ya kacha-adịbeghị anya igba. Ọ na-enye free-of-elekọta ndụ eze na-elekọta ụmụ akwụkwọ, ọma n'ụlọ akwụkwọ, ma na-enweghị ike banye na-elu-maka eze insurance, n'ihi ihe ndị metụtara ego.
Ewu ewu na nke digital ego emeela ka ọtụtụ eze na-elekọta ọrụ ịmụta ọhụrụ a n'aka ugwo. Dental clinics na nakweere cryptocurrency ịkwụ ụgwọ kọrọ ịnabata oku nile nke US. N'iburu nke a n'uche na ndagwurugwu nke tech-savvy ìgwè mmadụ, Enwu Dental nwere ike n'ụzọ dị mfe isi ebe eze na ọgwụgwọ na nleghari kpọmkwem nke a karịsịa na-ege ntị.
Enwu Dental enyekwara Dentacoin Network tinyere iri abụọ ndị ọzọ eze na-eme gburugburu ụwa, dị na USA, Australia, UK, Italy, Netherlands, Hungary, Bulgaria, Serbia, Malaysia, Taiwan, Pakistan, Fiji, India.
Kraken Daily Market Report maka 09.06.2018
$52.6M ahịa gafee ahịa niile taa
Next Post:Kwa atọ German weere cryptocurrencies dị ka onye na ego
Angelyn Yaklich kwuru:
June 20, 2018 na 3:26 AM
Deandrea Niswander kwuru:
June 23, 2018 na 10:51 AM